Day: Ọktọba 24, 2019
Connezọ Njikọ Ọhụrụ na Menteşe Bus Station
Muğla Metropolitan Munenti Mentese mgbe ikikere dị mkpa na ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ ahụ, iji mee ka okporo ụzọ nke njikọ okporo ụzọ ọhụrụ dị mfe belata. Ndi isi obodo Mu Metrola, ihe ngbanye XillionX nke TL na Menteşe District [More ...]
Obodo Mersin nke Mersin na - ekepụta ihe site n’ihe mkpofu wee mee akara
Ndị otu na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ. Na gburugburu ebe obibi [More ...]
Ndị na-agba ụkwụ na Mersin nwere nchekwa karịa
Ọrụ ndị Mersin Obodo ukwu bidoro site na ebumnuche nke Vahap Seçer iji mee ka okporo ụzọ obodo dị mfe ma nye nchekwa na-agafe aga-eji nnukwu ọsọ. Obodo ukwu site n’aka ndị ji ụkwụ aga n’obodo n’enweghị nsogbu [More ...]
Minister Pakdemirli abanyela na Isi Obodo
Minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na ọhịa Bekir Pakdemirli, mere njem njem n'ụsọ ụgbọ oloko. Onye Minista oru ugbo na oke ohia Bekir Pakdemirli, nke ndị injin ọhịa jiri mee ka ndị OGM jiri rụọ ọrụ na Behiçbey Forest Nursery na Ankara. [More ...]
Obodo Kocaeli na-aga n'ihu na-ewuli okporo ụzọ gaa n'ọtụtụ ebe nke Kocaeli. N'ime otu a, Ngalaba Park na Green Areas na-amalite na nkwụsị nke Brissa nke Kartepe [More ...]
Egota Ve matriiti na Nkwụsị Proje iji mee ka ụmụ amaala na-eche na bọs na tram akwụsị X Mathematics na Stop Proje project na Konya [More ...]
Antalya Union of Chambers of Tradesmen na Craftsmen na nzukọ a na-enwe na nsogbu nsogbu nke ndị na-azụ ahịa na-enyocha. Onye isi nke Antalya Chamber of Tradesmen and Craftsmen (AESOB), nke Adlıhan Dere, Nurettin, onye na-esote onye isi ndị uwe ojii na ndị uweojii na-ahụ maka ịre ahia [More ...]
Akuko Ordu University ‘Samsun-Sarp High Speed ​​Train Project’; "Ọ ga-eweta nnweta dị mkpa iji dozie nsogbu nsogbu akụ na ụba, karịsịa ọrụ, site na ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ elu na-agba ọsọ ụgbọ elu na mpaghara". [More ...]
Amzọ ụgbọ oloko Pamukkale Express na Ahịa tiketi
Pamukkale Express bụ ụgbọ TCDD Transportation na-agagharị n'etiti Denizli na Eskisehir. Naanị ụgbọ ala pulman bụ ụgbọ oloko. Ndị njem si n'ụgbọ okporo ígwè jiri usoro oche oche nke 2 + 1 [More ...]
Turkey, TRMCA ihe R & D na R & D Advisory Center na ịgba ke Concrete
Istanbul Development Agency (İSTKA) Innovative na ihe ọrụ rụrụ n'ime akporo nke Istanbul Financial Nkwado Mmemme "Turkey Ready Mixed Concrete Association of Concrete Research, Development na Technology Advisory Center" oru ngo, Turkey dị mkpa na ihe R & D [More ...]
Nkwụsị nke Nrọ enweghị ike iwere Haydarpaşa na Sirkeci site na ndị nke Istanbul
Dika nzughari maka mkpochapu iwu nke ndi na achikota Istanbul Metropolitan Municipality site na nro maka oru Haydarpaşa na Sirkeci Station, IMM's Member Member Süleyman Solmaz kwuru na usoro a [More ...]
Anyị ka nwere ike na-abanye ụgbọ oloko ahụ site na Haydarpaşa
Afọ asaa na ikpo okwu anọ na-eje ozi ruo ọtụtụ afọ, Eastern Express, Capital Express, Fatih Express, Kurtalan Express, dị ka ụgbọ oloko a maara nke ọma ahapụwo ruo ọtụtụ afọ site na Haydarpasa Station. Wayszọ ndị a na-agakarị [More ...]
Tragbọ oloko na-aga njem na-amachi n'ike n'ime ndị ọrụ na Izmir
Na mpaghara Konak nke Izmir, ụgbọ oloko a na-arụ ọrụ na-arụzi ọrụ dị ọcha n'oge usoro nhicha ma kụọ ụlọ ebe ndị ọrụ nọ. Onye ọrụ na-ehicha ihe merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ. N'aka nke ọzọ, mgbidi nke ụlọ ahụ n'ihi mmetụta [More ...]
RayHaber Ozi Ntanye 24.10.2019
A ga-enweta Ọrụ okporo ụzọ n'etiti Çakmak Çiftehan gafee ọrụ nlekọta ma rụkwaa ọrụ nke GSM-R na CTC Control Center Systems ga-enweta
Mkpa Bursa na 2020 Etinye ego